သတင်း - ကြမ်းခင်းထားသော ရုပ်ရှင်များ ထုတ်လုပ်ရေး လက်မှုပညာနှင့် အင်္ဂါရပ်များနှင့် အချပ်လိုက်ရုပ်ရှင်များကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း။
Laminated ရုပ်ရှင်များကို PE၊ PP ကဲ့သို့သော မတူညီသော ပစ္စည်းနှစ်ခု သို့မဟုတ် အလွှာများစွာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။စက္ကူ သို့မဟုတ် သတ္တုသတ္တုပြားများဖြင့် PVC နှင့် PS နှင့် PET ပိုလီမာများ။၎င်းတို့ကို ထုပ်ပိုးရာတွင် အဓိကအသုံးပြုကြသည်။အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြမ်းခင်းထားသော ရုပ်ရှင်များ ထုတ်လုပ်သည့် လက်မှုပညာနှင့် ၎င်း၏ အင်္ဂါရပ်များ နှင့် အကြောင်းကို ဆွေးနွေးကြသည်။laminated ရုပ်ရှင်ကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း။.
ယေဘုယျအားဖြင့် ပေါင်းစပ်ရန် လက်ရာသုံးမျိုးရှိသည်။ပထမဦးစွာ extruding ပေါင်းစပ်လုပ်ငန်းစဉ်သည် အစေး (polyethylene, polypropylene, EVA, ion resin, etc.) ကို ကော် သို့မဟုတ် အပူအလွှာအဖြစ် ရုပ်ရှင်အမျိုးမျိုးတွင် ဖုံးအုပ်ထားပြီး၊ ထို့နောက် အအေးခံခြင်း၊ နှပ်ခြင်းတို့ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ဒုတိယအလွှာကိုအသုံးပြုပါက၊ ၎င်းသည် extrusion composite ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက extrusion coating ဖြစ်သည်။ဒုတိယအနေဖြင့် စိုစွတ်သောပေါင်းစပ်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ရေပျော်ဝင်နိုင်သောကော်ကို အသုံးပြုသည်။၎င်း၏လက္ခဏာမှာ ပထမပေါင်းစပ်ပြီးနောက် ခြောက်သွေ့သည်။အလွှာနှစ်ခုသည် တညီတညွတ်တည်း လိုက်ဖက်သော်လည်း ကော်အပိုင်းများတွင် အများအပြားပါဝင်နေသေးသည်။စိုစွတ်သောပေါင်းစပ်လုပ်ငန်းစဉ်ကို စက္ကူနှင့် အခြားအလွှာပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်ခြင်းတွင် အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ဆေးရွက်ကြီးထုပ်ပိုးမှု၊ သကြားလုံးစက္ကူ/ အလူမီနီယမ်ပေါင်းစပ်ထုတ်ကုန်အလွှာနှစ်ခုတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။တတိယအချက်မှာ Solvent-based dry composite process နှင့် solvent-free dry composite process တွင် တူညီသောအချက်များ ရှိသည်- ဆပ်စတေ့နှစ်ခုသည် ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ၊ ကော်အလွှာပေါ်တွင် ကပ်ထားသော ကော်အလွှာတွင် Solvent သို့မဟုတ် ပါးလွှာခြင်း မရှိပါ။လုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ခုကို စုပေါင်းပေါင်းစပ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် ရည်ညွှန်းပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့အကြား ခြားနားချက်တစ်ခု ရှိသည်- ယခင်က ကော်ကိုအသုံးပြုသည် သို့မဟုတ် အများအားဖြင့် ကော်ပါရှိသော ဓာတုဗေဒပစ္စည်းပါဝင်သည့် ဖြစ်စဉ်၊ နောက်ပိုင်းတွင် ကော်ကိုအသုံးပြုသည် သို့မဟုတ် ကော်ကို အသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့် သတ္တုမပါသော၊ အခြောက်ခံစက်၊ အခြောက်ခံသေတ္တာသည် လိုအပ်ပါသည်။
ပေါင်းစပ်ထားသော ရုပ်ရှင်များ၏ ထူးခြားချက်များ-
1.ရေခိုးရေငွေ့အတားအဆီး၊ စိုစွတ်သောကုန်ပစ္စည်းများ ခြောက်သွေ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်နှင့် အအေးစိုသော သုတ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည်- ဖုတ်ထားသော ထုတ်ကုန်များ၊ အမှုန့် ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့သော ခြောက်သွေ့သော ကုန်ပစ္စည်းများကို အစိုဓာတ်မှ ကာကွယ်ပါ။
2. အက်ဆစ်ပစ္စည်းအတားအဆီး။အဆီနှင့် လတ်ဆတ်သော ကုန်ပစ္စည်းများ ကဲ့သို့သော ဓာတ်တိုးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။
3. ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် အတားအဆီး။ MAP ထုပ်ပိုးမှုတွင် CO2ဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး ကာဗွန်နိတ်အချိုရည်များနှင့်အတူ တည်ငြိမ်သောထုပ်ပိုးမှုဓာတ်ငွေ့ပါဝင်မှုကို ရရှိခြင်း။
4. မွှေးရနံ့ အတားအဆီး။ ထုပ်ပိုးမှုမှ မွှေးရနံ့ကို ကာကွယ်ပေးပြီး ကော်ဖီကဲ့သို့သော ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးခြင်း။
5. အနံ့ခံခြင်း ။ ပြင်ပအနံ့ စုပ်ယူမှုကို တားဆီးခြင်း သို့မဟုတ် မွှေးရနံ့ ဆုံးရှုံးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း။
7. ၎င်းကို ခိုင်ခံ့စွာပိတ်ပါ။ပေါင်းစပ်ဖလင်ကို တံဆိပ်ခတ်ရန်အတွက်၊ ပူပြင်းသောဖိအားတံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို အသုံးပြုသည်။
ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။အလိုအလျောက် pelletizing ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်စနစ်.ခါးပတ်သယ်ယူကိရိယာ၊ ဖြတ်စက်နှင့် ကြိတ်စက်၊ ကြိတ်စက်၊ ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့် ရေလောင်းခြင်းနှင့် လေတိုက်ခြင်းတို့ကို ထုပ်ပိုးခြင်းတို့နှင့်အတူ။အောက်မှာ စက်တွေရဲ့ ပုံတွေ ပါပါတယ်။